Home Wararka Mushaarkii saraakiisha iyo shaqaalaha NISA oo gabi ahaanba la joojiyay
Mushaarkii saraakiisha iyo shaqaalaha NISA oo gabi ahaanba la joojiyay
Sida ay MOL u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay waxaa gabi aanba la joojiyay mushaarka shaqaalaha iyo saraakiisha ee Hay’adda NISA. Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ah Agaasimaha KMG-ka ah ee NISA garabka uu magacaabay ra’iisul wasaare Rooble, ayaa lacago badan ka jartay askarta iyo saraakiisha NISA, si gaar ah kuwa taabacsan Yaasiin Fareey oo isagana ah taliyaha NISA garabka Farmaajo.
Saraakiil kamid ah sirdoonka ayaa warbaahinta u sheegay in lacagaha laga jartay ay qeyb ka tahay gunnooyin u soo dhici jiray askarta iyo saraakiisha qaar, taasoo ay isaga dabari jireen kirooyinka aqalada ay degan yihiin iyo howlo kale. Talaabadan ayaa la sheegay in taliye Goobe uu ka damacsan yahay sidii uu cadaadis ugu saari lahaa askarta iyo saraakiishan iney garabkiisa noqdaan oo ay isaga soo tagaan dhanka Yaasiin Fareey oo, hadii ay iska diidaanna uu xanibaado dhaqaale saari doono.
Talabadaan uu qaaday RW Rooble ayaa laga yaabaa in ay abuurto dhaawac soo gaara ciidanka Nabadsugida.